गृहमन्त्री थापाले लिए छापामार शैलीमा एक्सन, एकपछि अर्को ठाउँमा छापा मार्दै, अब कसको पालो ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
गृहमन्त्री थापाले लिए छापामार शैलीमा एक्सन, एकपछि अर्को ठाउँमा छापा मार्दै, अब कसको पालो ?
काठमाडौ – गृहमन्त्री राम बहादुर थापा अपराधीहरुलार्इ समाउन छापामार शैलीमा ‘एक्सन’ लिएका छन्। जसमा एकपछि अर्काे फस्दै गइरहका छन्। गृहमन्त्री थापाले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमा नै साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अपराधीहरु (ठुला माछा) को नजिक पुगिसकेको बताएका थिए।
मन्त्री थापाकै निर्देशनमा उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि गृहका सह–सचिव इश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवा घरमा बुधबार मा छापा मारेको छ । टोलीले रेस्टुरेन्ट सञ्चालक चेतन भण्डारीको पनि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा छापा मारेको हो ।
अदालतबाट आदेश लिई रेस्टुरेन्टहरुमा शिलबन्दी गरिएको विशेष छानबिन समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले बताए।भण्डारीद्वारा सञ्चालित बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टका ६ वटा आउटलेटमा शिलबन्दी गरेको छ। रेस्टुरेन्टका सञ्चालक भण्डारीले सुन तस्करीका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’सँग मिलेर तस्करीमा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि छानविन टोलीले यस्तो कदम चालेको हो। उनको बैंक खाता तथा घरजग्गा यसअघि नै रोक्का भइसकेको छ।सुन तस्करी काण्डमा उनी फरार प्रतिवादी हुन्।
उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दामा पनि अनुसन्धान हुने समितिले जनाएको छ। सोमबार मात्र समितिले तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका राजेन्द्र शाक्यको तीनै वटा सुन पसलमा छापा हानी सबै सुन तथा गहना बरामद गरेको थियो। त्यस्तै आइतबार मोहन अग्रवालको घरमा छापा हानिएको थियो।